कोरोना सार्न प्यालीस्टाइनीका कारहरुमा थुकिन्छ, आखिर किन ? « LiveMandu
कोरोना सार्न प्यालीस्टाइनीका कारहरुमा थुकिन्छ, आखिर किन ?
२३ चैत्र २०७६, आईतवार १०:०७
कोरोना मानविय शरीरका थुक, खकार, सिंगान आदिबाट सर्न सक्ने तथ्याकं आएसंगै पूर्वी जेरुसलेमको बइट इस्का भन्ने गाँउमा केहि ईज्रेली सेट्लरसहरुले प्यालीस्टीइनीहरुका कारहरुमा थुक्ने र त्यस थुकबाट कोरोना सरोस् भन्ने कामना गरेको खबर आएको छ ।
यि सबै रामोट भन्ने ठाँउका केहि उपद्रो गर्ने सेटलर्स रहेका र उनीहरुको गाँउ छिर्ने र निस्कने प्यालीस्टाइनीहरुका कारहरुमा थुक्ने गरेको बताइएको छ । केहि दिनअघि मात्र तिनी सेट्लरसहरुमा भारी मात्रामा कोरोना संक्रमण परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । प्यालीस्टाइनी यूवाहरुले ति उपद्रो मचाउनेहरुलाई लखेटेको र यिनै प्यालीस्टाइनी यूवाहरुको पहलमा त्यहाँका सडक र गल्लीहरु डिसइन्फेक्ट गर्ने कार्य पनि भइरहेको खबर छ । आखिर किन ईज्रेली सेट्लरसहरुले प्यालीस्टाइनी यूवाहरुलाई यति घृणा गर्दैछन् त ? मध्यपूर्वका बस्तीहरुमा साथसाथै बसेका ईज्रेली र प्यालीस्टाइनीहरु कोरोनाको बिषम परिस्थितीमा पनि एक हुन नसक्नुको औचित्य के हो त ? विश्व चकित छ ।
केहि हप्ताअघि ईज्रेलमा कार्यरत प्यालीस्टाइनी कामदारहरु पश्चिम तटको जोर्डन किनारमा भेला भएर आफूहरुलाई क्वाराइन्टाइनमा राख्दा ईज्रेली कम्पनी र सञ्चालकहरुले भुँईम सुत्न लगाएको भनी विरोध पनि गरेका हुन् । एकजना प्यालीस्टाइनी कामदारहलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि ईज्रेली अस्पतालले हत्कडी लगाएर अस्पतालबाट बाहिर निकालिदिएको खबर पनि सप्रमाण आएको थियो ।